ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်သည်တူစက်ကြိတ်ခွဲစက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအစေ့များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်, sorghum အပါအဝငျ, ပဲပုပ်, မုယောစပါး, ကုလားပဲ, ပြောင်းဖူး / ပြောင်း, ဆန်, ဂျုံ, စသည်တို့,ဒါ multi-functional ဖြစ်စေ mini ကိုပြောင်းဖူးကြိတ်စက် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်
ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်သည်တူစက်ကြိတ်ခွဲစက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအစေ့များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်, sorghum အပါအဝငျ, ပဲပုပ်, မုယောစပါး, ကုလားပဲ, ပြောင်းဖူး / ပြောင်း, ဆန်, ဂျုံ, စသည်တို့,ဒါ multi-functional ဖြစ်စေ mini ကိုပြောင်းဖူးကြိတ်စက် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်, အသုံးပြုသူ - ဖော်ရွေများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. ဒါဟာကျယ်ပြန့်အစားအစာစက်ရုံများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ရာသီစက်ရုံများ, အစာကြိတ်စက်ရုံနှင့်တစ် ဦး ချင်းအိမ်ထောင်စုများနှင့်အခြားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစားပြောင်းစက်စက်တစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံအရမ်းကုန်ကျမှာမဟုတ်ဘူး
1.ဒီသံမဏိကြိတ်စက်ကြိတ်စက်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည်, ဂျုံလို, ပြောင်း, ဆန်, ပဲပုပ်, မြေပဲ, ပြောင်းဆန်သို့မဟုတ်အရိုးကဲ့သို့သောအခြားအစိုင်အခဲပစ္စည်းများ, အသားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်စသည်တို့ကို.
3. ဤပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်, တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်